Akụkọ Bible: Ụgbọ Ha Ekpuo n’Otu Agwaetiti - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
LEE! ụgbọ mmiri ahụ nọ ná nsogbu! Ọ na-etiwasị! Ị̀ na-ahụ ndị ahụ mabanyere n’ime mmiri? Ụfọdụ n’ime ha eruwala n’elu ala. Onye ahụ ọ̀ bụ Pọl? Ka anyị chọpụta ihe nọworo na-eme ya.
Cheta na e ji Pọl eji ruo afọ abụọ n’ime Sesaria. Mgbe e mesịrị, e tinyere ya na ndị mkpọrọ ndị ọzọ n’ụgbọ mmiri, ha wee gawa Rom. Mgbe ha gafere na nso agwaetiti Krit, ajọ ifufe malitere ife. Ifufe ahụ fesiri ike nke na ha apụghịzi iduzi ụgbọ ahụ ọzọ. Ha apụghịkwa ịhụ anyanwụ n’ehihie ma ọ bụ kpakpando n’abalị. N’ikpeazụ, mgbe ọtụtụ ụbọchị gasịrị, ndị nọ n’ime ụgbọ ahụ enweghịzi olileanya na a ga-azọpụta ha.
Pọl wee bilie ọtọ, sị ha: ‘Ọ dịghị onye n’ime unu ga-anwụ, ọ bụ naanị ụgbọ a ga-ala n’iyi. N’ihi na n’abalị gara aga, mmụọ ozi Chineke bịakwutere m, sị, “Atụla egwu, Pọl! Ị ghaghị iguzo n’ihu Siza onye ọchịchị Rom. Chineke ga-azọpụtakwa ndị niile gị na ha nọ n’ime ụgbọ.”’
Ihe dị ka n’ime abalị n’ụbọchị iri na anọ kemgbe oké ifufe ahụ malitere, ndị na-anya ụgbọ mmiri ahụ chọpụtara na mmiri ahụ adịchaghịzi omimi! N’ihi ịtụ egwu na ụgbọ ahụ ga-etiwasị na nkume n’ọchịchịrị ahụ, ha tụdara arịlịka ha. N’ụtụtụ echi ya, ha hụrụ ụsọ mmiri. Ha kpebiri ịnyara ụgbọ ahụ ruo kpọmkwem n’ụsọ mmiri ahụ.
Ma mgbe ha ruru ụsọ osimiri ahụ nso, ụgbọ ha metụrụ mkputamkpu ájá wee tọ na ya. Ebili mmiri wee malite itiwasị ya. Onyeisi ndị agha nke na-elekọta ha sịrị ha: ‘Unu ndị pụrụ igwu mmiri, burunụ ụzọ maba n’oké osimiri, gwupụnụ n’elu ala. Ndị ọzọ, soronụ ha maba ma jidenụ iberibe osisi ndị a tikapụtara n’ụgbọ a aka.’ Ọ bụkwa ihe ha mere. N’ụzọ dị otú a, narị mmadụ abụọ na iri asaa na isii ndị nọ n’ụgbọ mmiri ahụ ruru n’elu ala n’udo, dị nnọọ ka mmụọ ozi ahụ kwere ná nkwa.
A na-akpọ agwaetiti ahụ Mọlta. Ndị ala ahụ nwere obiọma, ha wee lekọta ndị si n’ụgbọ ahụ pụta. Mgbe ihu igwe bịara dị mma, e tinyere Pọl n’ụgbọ ọzọ, buru ya gawa Rom.
Ọrụ 27:1-44; 28:1-14.
Gịnị mere ụgbọ Pọl nọ n’ime ya ka ụgbọ ahụ na-agafe na nso agwaetiti Krit?
Gịnị ka Pọl gwara ndị nọ n’ụgbọ ahụ?
Olee otú ụgbọ ahụ si tiwasịa?
Ntụziaka ndị dị aṅaa ka onyeisi ndị agha nke na-elekọta ha nyere, ọ̀ bụkwa mmadụ ole ruru n’elu ala n’udo?
Gịnị bụ aha agwaetiti ahụ ha kwụsịrị na ya, gịnịkwa mere Pọl mgbe ihu igwe bịara ka mma?
Gụọ Ọrụ Ndịozi 27:1-44.
Olee otú ịgụ banyere ojiji Pọl ji ụgbọ mmiri gaa Rom ga-esi mee ka anyị nwekwuo obi ike na ihe ndị e dekọrọ n’ime Bible ziri ezi? (Ọrụ 27:16-19, 27-32; Luk 1:3; 2 Tim. 3:16, 17)
Gụọ Ọrụ Ndịozi 28:1-14.
Ọ bụrụ na a kpaliri ndị ọgọ mmụọ bi na Mọlta igosi Pọl onyeozi na ndị ha na ya so “obiọma pụrụ iche,” gịnị ka e kwesịrị ịkpali Ndị Kraịst ime, oleekwa ụzọ kasị mma anyị ga-esi mee nke a? (Ọrụ 28:1, 2; Hib. 13:1, 2; 1 Pita 4:9)